I-20 YEEKHRIM ZAMEHLO EZIGQWESILEYO 2021 - IITHAYILE ZAMEHLO ZEMIBIMBI, ISANGQA ESIMNYAMA, IINGXOWA - UBUHLE OBUJONGIWE NGOKUTSHA
I-20 yeeKhrimu zamehlo eziBalaseleyo zemibimbi, ngokweDermatologists
Eyona / Ubuhle Obujongiwe Ngokutsha
Ubuhle Obujongiwe Ngokutsha
Kukho isizathu sokuba ulusu olujikeleze amehlo lukhangeleke ngathi ludala kuqala: Leyo ndawo intekenteke inovakalelo lokolula kunye nokuwohloka, yiyo loo nto ikhula ngokukhawuleza kunezinye iinxalenye zobuso bakho. Mholweni, imibimbi .
Ke ukuba ukugcina ibala lolutsha ibalulekile kuwe, kubalulekile ukuba usebenzise ukhilimu wamehlo yonke imihla. Into ekhoyo, ikhona amawaka Iinketho ezikhoyo, kwaye kunokuba nzima ukwazi ukuba ujonge ntoni kuluhlu lwezithako. Nokuba uyazi ukuba ujonge ntoni, ukulandelela into ehambelana netyala kungadinisa. (Funda: kufutshane-ayinakwenzeka.)
Ke senze umsebenzi wakho saza sathetha needermatologists ezimbalwa ukuba sifumanise ngokuchanekileyo into ekufuneka ikwikhrim yamehlo esebenzayo yemibimbi, kunye neyona nto ithengiweyo iyathengiswa ukuzama.
Ungayikhetha njani eyona cream yokuguga iliso kwimibimbi, ukukhukhumala, kunye nesangqa esimnyama
Yintoni eyenza i-cream cream ilwe nokuguga? Tara Rao, MD, ugqirha wesikhumba e Iqela leSchweiger Dermatology kwaye UJoshua Drafman, MD , ugqirha wesikhumba kwisibhedlele iMount Sinai esibizwa ngokuba zezona zinto ziphambili ekufuneka uzijongile nokuba loluphi uhlobo lolusu okanye ithoni.
✔️ IHyaluronic acid: Ifunyenwe ngokwendalo eluswini, hyaluronic acid utsala amanzi, anceda ukuhambisa amanzi kunye nokuthambisa ulusu. Amaxesha amaninzi, imibimbi engaphantsi kwamehlo isisiphumo sokomisa, utshilo uGqirha Rao, kwaye i-hyaluronic acid ifundwe kakuhle kwaye ibonisiwe ukunceda ukunciphisa iimpawu zokwaluphala. (Jonga ezi Iikhrim zamehlo zolusu olomileyo ukuba i-hydration yeyona ngxaki yakho iphambili.)
Iipeptides: Ii-peptides ze-Copper, i-polypeptides, kunye ne-oligopeptides kucingelwa ukuba zingene esikhumbeni kwaye zincedise ekwakheni i-hyaluronic acid kunye ne-collagen. Ezi proteni zolwakhiwo zibamba iiseli kunye nezicubu kunye njengeglu, ukunciphisa ukubonakala kwemibimbi.
I-Retinol kwakhona: Isiphumo sevithamini A sikhuthaza imveliso ye-collagen kwaye sikhuthaze ukubuyiswa kweseli ukunceda ukunciphisa iimpawu zokwaluphala. Ngenxa yokuba ulusu oluphantsi kwamehlo lubuthathaka, i-dermatologists sithethe ngayo kwiimveliso ezinconyelwayo ezinemilinganiselo ephantsi ukujonga kwakhona .
Isikrini selanga: Le yinto engacacanga, utshilo uGqirha Rao. Ngaphandle kokhuseleko olufanelekileyo, imitha ye-UV iphula i-collagen kunye nobudala besikhumba sakho. (Ngelishwa, i-SPF inokuba nzima ukuyifumana kwizithambiso zamehlo, ke yongeza ngeyakho ubuso elangeni ukuba kuyafuneka!)
Ii-Antioxidants: Iivithamini C kunye no-E, i-asidi ye-ferulic, kunye ne-berry extracts zinceda ukunciphisa uxinzelelo lwe-oxidative ngenxa yemitha ye-UV okanye izinto ezingcolisayo, ucacisa uGqirha Rao. I-Antioxidants ikwaphucula ukubonakala kwemigca emihle kunye nemibimbi.
Eyona iliso cream for imibimbi
Nokuba ujonge into etyebileyo imibimbi esekwe nzulu okanye imveliso ukuhambisa imigca emihle kunye nokunciphisa ukubonakala kwesangqa esimnyama, uya kufumana into eza kukusebenzela.
I-A.G.E. Isixhobo SamehloUlusuCeuticals elungec.com$ 100.00 THENGA NGOKU
UlusuCeuticals A.G.E. Isixhobo Samehlo
I-SkinCeuticals sele ikho ixesha elide; bane uphando oluninzi ngasemva kweemveliso zabo , utsho uGqirha Rao. Le cream yamehlo inomxube olungileyo wayo yonke into efunekayo ukunciphisa imigca elungileyo kunye nemibimbi: ii-antioxidants, iipeptides, kunye nelanga.
Ukujonga kwakhona: Andinayo irekhodi elungileyo lokuhlala kwiimveliso, kodwa bendihlala ndisebenzisa i-A.G.E Eye Complex phantse unyaka ngenxa yezizathu ezibini: 2. Amehlo am ‘aqolileyo’ ngoku aqaqambile kwaye aqinile kunakwiminyaka eli-10 eyadlulayo. Olu kuphela konyango endilusebenzisa ecaleni kwamehlo am.
IHydro yokuNyusa iso kwiGel-CreamNeutrogena amazon.com$ 12.50 THENGA NGOKU
I-Neutrogena Hydro yokuNyusa i-Gel-Cream
Le khrimu yamehlo ehambisa amanzi ithambile ngokwaneleyo emehlweni akho kwaye iqulethe i-hyaluronic acid ukuze ityebe kwaye ifume ulusu. Isebenza njengesiponji ukutsala i-hydration ukusuka kulusu olunzulu kunye nasemoyeni, utshilo uGqirha Zeichner.
Ukujonga kwakhona: Phantse iinyanga ezimbini, ndinengxaki zamehlo am omileyo, ukuqhekeka, ukurhawuzelela, kunye nokutsha ngathi kukuphambana kwimozulu eyomileyo. Babebomvu kwaye bonakele ngokubonakalayo. Akukho nto ndizamile iye yanceda konke konke. Kwiintsuku ezimbini okoko ndinayo le nto, iphuculwe kangangokuba kungabi buhlungu kwaye imiqondiso ebonakalayo yokuqhekeka iphantse yaphela.
I-Retinol Correxion Line yokuTyibilika kweCream CreamRoC amazon.com $ 19.99$ 17.51 ​​(12% icinyiwe) THENGA NGOKU
I-RoC Retinol yeCorrexion Line egudileyo yeCream Cream
Abo banobunzima obugqithisileyo ecaleni kwamehlo banokufuna ukuqaphela a ukujonga kwakhona ukhilimu wamehlo. UGqirha Zeichner ucebisa olu khetho lokuthambisa kuba kunciphisa izangqa ezimnyama, ukukhukhumala, iinyawo zecrow, kunye nemibimbi ngaphandle kokuba ngqwabalala kwisikhumba esiphantsi kwamehlo.
Ukujonga kwakhona: Ukuba uzimisele ukufaka le mihla le UYA kubona iziphumo. Ndiye ndaqala ukuqaphela ukuncitshiswa okwenyani kwimigca yam emihle kunye nemibimbi. Kwaye okumangalisa ngakumbi kukuba ndiyaqaphela ukuba umbimbi onzulu phakathi kwamashiya am uyaphela. Ngaba ihambile? Hayi. Kodwa iziphumo ziyachukumisa kwaye ndiyothuka! Ngokwenyani khange ndicinge ukuba ikhawuntara ye-retinal creams inokusebenza, kodwa le khrimu ingqineke ukuba ndiphosakele.
I-Colorescience Iyonke iliso kwi-3-in-1 yoNyango loNyango lwe-SPF 35
Iyonke iliso 3-in-1 yoNyango loNyango lwe-SPF 35Colorescience elungec.com$ 69.00 THENGA NGOKU
Ndiyazithanda iimveliso zokwenza imisebenzi emininzi, kwaye zizinto ezintathu ezi: Yinto yokufihla kunye ne-sunscreen, kwaye ineempawu zokulwa ukuguga Utshilo u-Mona Gohara, MD, unjingalwazi oncedisayo weklinikhi kwiYale School of Medicine kunye nomdibanisi ULWIMI ukhathalelo lolusu. Amehlo aguga ngokukhawuleza, ke xa isetyenziselwa ukufihla, ufumana i-SPF eyaneleyo kuloo ndawo. (Kungenxa yoko le nto ifumene indawo kwiiMbasa zethu zezeMpilo zezeMpilo zango-2020!)
Ukujonga kwakhona: Kutheni ndingazi ngale nto ngokukhawuleza! Ayigubungeli kuphela izangqa zam ezimnyama kodwa ayicimi kwaye inciphise nokubonakala kwemigca emihle !! Kuya kufuneka ufake isicelo ngokwahlukileyo kancinci (pat kwimveliso) kodwa ngaphandle kokulungiswa kokusebenzisa.
I-Banana eqaqambileyo yamehloOLEHENRIKSEN sephora.com$ 39.00 THENGA NGOKU
I-OLEHENRIKSEN I-Banana Ekhanyayo Amehlo aQhelekileyo
Oku inkolo yamehlo ethandwayo yenkolo ifakwe ivithamin C , i-antioxidant elwa nomonakalo weeseli, inceda ukuvelisa i-collagen ukunciphisa imigca, kunye nokuqaqamba kwesikhumba. Ukuqiniswa nge-collagen, ifomula yokuhambisa amanzi ivuselela ubuso kwangoko ngokunciphisa ukubonakala kwesangqa esimnyama.
Ukujonga kwakhona: Bendihlala ndinxiba ubuso obugcweleyo bezithambiso imihla ngemihla, kodwa ndinosana olutsha bendihlala ndinxiba nje i-mascara kunye nokufihla okuthile kwiziphako. Ezi zinto ziyamangalisa ngokufihla ubusuku bokungalali! Xa ndibeka oku ekuseni ndiziva ndikhululekile ukuphuma esidlangalaleni ngaphandle kokufihla ukufihla iibhegi zam / izangqa ezimnyama.
I-Retinol 24 MAX yasebusuku yeCream CreamUmsitho Walmart.com$ 25.95 THENGA NGOKU
I-Olay Regenerist Retinol 24 MAX Cream yoBusuku
I-retinol, i-niacinamide (uhlobo lwevithamini B3), kunye nomxube wepeptide kule ndawo yokuthengisa iziyobisi ukhilimu uyenza iphumelele kwizangqa ezimnyama, imigca entle, kunye nolusu olukhanyayo. Ichaphaza nje lefomula etyebileyo ihambisa ukukhanya kwesikhumba okukhangeleka kakuhle .
Ukujonga kwakhona: Imveliso inokungqinelana okukhulu. Ifunxa ngokukhawuleza kwaye ibonelela ngokufuma okuninzi kunye ne-hydration kwindawo yamehlo. Imigca yam ikhangeleka igudile emva kokuyisebenzisa. Umgangatho ulingana nezinto ezininzi zokuthambisa amehlo endikhe ndazisebenzisa ngaphambili.
Ukulungiswa okukhawulezayo kokuLungisa iMiloNeutrogena amazon.com$ 16.43 THENGA NGOKU
I-Neutrogena ekhawulezayo yokuLungisa imibimbi yeCream Cream
Ikrimu yamehlo iqulethe i-retinol ukukhawulezisa ingeniso yeseli kunye nokugxotha ngokufanelekileyo imigca entle , imibimbi, kunye nonyawo lukanomyayi. Ikwanayo ne-hyaluronic acid enikezela ukufuma okungaphezulu kwaye ityebile ulusu, utshilo udermatologist webhodi oqinisekisiweyo UDebra Jaliman, MD Umbhali we Imigaqo yoLusu .
Ukujonga kwakhona: Ndiyayithanda le mveliso! Ndineminyaka engama-54, kodwa wonke umntu uqikelela ukuba ndikwiminyaka yam engama-30 ukuya kowama-40. Imigca emihle iyanyamalala ngomlingo! Yeyona ibalaseleyo endakha ndayisebenzisa. Ndisebenzise ZONKE iimveliso ezibizayo ukuzama ukufumana eyona ilungileyo. Ndiyavuya ukuba ndigqibile ukujonga.
Ukhuseleko lwamehlo e-SPF 50UlusuCeuticals elungec.com$ 30.00 THENGA NGOKU
I-SkinCeuticals yeLiso lenyama i-UV yoKhuselo i-SPF 50
Nangona i-SPF ibaluleke kakhulu kwikrimu yamehlo, kunokuba nzima ukufumana ifomula ebandakanya enye. Oku kuphakanyisiwe-malunga nemveliso evela kwi-SkinCeuticals iqulethe i-SPF 50 ukunqanda ukonakala kwelanga , ii-ceramides ukuya kwi-hydrate, kunye ne-tint ekhanyayo kwithoni yesikhumba.
Ukujonga kwakhona: Oku kusombulula iingxaki ezininzi xa kufikwa kwiscreen selanga ejikeleze amehlo. Ngaphambi koko, bendiya kuba nelanga elangeni ukuze ndibone ngokubila okanye ngokusetyenziswa gwenxa kwaye emva koko ndijongane nokutshisa iiyure ezimbalwa. Le mveliso ayicaphukisi, iyitshise, okanye iyenze mandundu indawo yamehlo kwaphela. Iyaqhubeka njengesilika-kwaye ikwabonelela ngokukhanya okumbala kwindawo yamehlo. Kuhle kakhulu!
Iti eMnyama yobudala-ukuCothiswa kweLiso ukugxilaEntsha imvu.com$ 68.00 THENGA NGOKU
Iti entsha emnyama emnyama-yokuCothisa iso ukugxila
Le cream isisityebi liphupha ukuba uqhele ukoma kwindawo yakho engaphantsi kwamehlo. Ulusu lwakho luya kusela ii-antioxidants zalo ukulwa nemizila emihle kunye nokuthungwa, ukukhukhumeza, kunye nezijikelezo ezimnyama. Inkqubo ye- Ifomula yomsebenzi onzima uziva ukondla kunye nokucoceka eluswini, okwenza oku kube kukhetho olukhulu ebusuku.
Ukujonga kwakhona: Le cream yamehlo itshintsha umdlalo! Ndisebenzise ezinye zeyona cream ibiza kakhulu phaya kwaye oku kubaphephetha emanzini. Uphantse walubona utshintsho ngengomso. Ndabeka udabs omncinci esandleni sam ngelixa ndandisevenkileni kwaye yayishiya loo ndawo igudile kwaye iqinile usuku lonke.
I-Redermic R Retinol Cream yamehloILa Roche-Posay amazon.com$ 46.95 THENGA NGOKU
I-La Roche-Posay Redermic R I-Retinol Cream Cream
Le khrimu yamehlo inceda ukunciphisa ukuvela kwemibimbi kunye nokukhukhumala ngokudibanisa i-retinol kunye ne-caffeine, lonke eli xesha lihleli lithambile kummandla wamehlo abuthathaka, enkosi ngokongezwa kokuhambisa amanzi ashushu entwasahlobo kunye nokusilela kweziqholo ezinokucaphukisa.
Ukujonga kwakhona: Ndikumbhobho wam wesibini wale cream yamehlo. Yile nto kanye bendiyikhangela kuyo yonke le minyaka. Ndiyayamkela into yokuba ndikwiminyaka yama-40 kwaye ndinenye inqwaba yeenyawo. Ndingayilindela kwiminyaka yam. Ndandinomdla ngakumbi ekufumaneni imveliso ethambisa indawo ephantsi kwamehlo ukuze ukufihla kube lula kwaye kusetyenziswe ngokukuko. Andikaze ndiziva ndonwabile ngale nto. Ngokuqinisekileyo oku kuyahambelana nomthetho osayilwayo kwaye kulifanele ixabiso.
Amehlo aKhanyayo e-100% eMaminerali ye-Cream SPF 40Supergoop! imvu.com$ 36.00 THENGA NGOKU
Supergoop! Amehlo aKhanyayo e-100% eMaminerali ye-Cream SPF 40
Ityetyiswe ngecaffeine kunye ne-SPF ebanzi , Le cream yamehlo ichasene nokuguga igudisa imigca emihle kunye nokukhukhumala ngelixa ukhusela indawo yamehlo entekenteke. Akukho buvumba, ukutshisa, okanye ukucaphuka okufunekayo-nkqu nakwi-sunscreen!
Ukujonga kwakhona: Ndihlala ndiphepha i-sunscreen phantsi kwamehlo kude kube ngoku. Kwakhona, kukho intwana ye-tint, ke ilungele usuku xa ufuna ukuya kwindalo encinci, okanye ulonwabo lwangaphandle lwasemini olufuna ukubonakala okuncinci. Ndinganxiba i-makeup encinci phantsi kwamehlo am ngoku. Zimbalwa izaleko, ixesha elincinci.
Hlaziya iGel yeLisoEltaMD elungec.com $ 56.00$ 45.60 (19% icinyiwe) THENGA NGOKU
I-EltaMD Hlaziya iGel yeLiso
UGqr Rao ungumlandeli wale sangqa simnyama- kunye nemibimbi yokulwa imibimbi yokulwa imibimbi kuba iqulethe umxube wee-antioxidants, iipeptides, kunye nezinto zokuthambisa . Ikwanayo i-niacinamide, eyi-antioxidant elungileyo kunye ne-anti-inflammatory enokusetyenziswa nakweyiphi na indawo yobuso, utshilo.
Ukujonga kwakhona: Andiqondi ukuba ndingathetha izinto ezintle ngokwaneleyo malunga nale gel. Ndiyisebenzise malunga nenyanga ngoku kwaye ndiqaphele umahluko kubume besikhumba phantsi kwamehlo am. Ivakala ngokungathi ulungisa i-silika phantsi kwamehlo akho kusasa nasebusuku.
I-Lumière Bio-yokuBuyisa iKhilimu yeLisoINEOCUTIS elungec.com$ 97.00 THENGA NGOKU
I-NEOCUTIS Lumière Bio-yokuBuyisa iKhrimu yamehlo
Le cream yamehlo ifumana isitampu sokwamkelwa nguGqirha Jaliman. Iqukethe i-hyaluronic acid ekhupha ulusu, icaffeine yokulwa nokudumba, kunye nesithako esibizwa ngokuba yiPSP, combo yee peptides zokulwa nemibimbi kunye nee-antioxidants ezizodwa kwiNeocutis.
Ukujonga kwakhona: Ndiqaphele umahluko kwinkangeleko yam emva kweeveki ezimbini zokuyisebenzisa. Khange nditshintshe enye into, andifumananga naluphi na olunye unyango, kwaye ndothukile ngokunyanisekileyo yile nto iguqula umdlalo. Ndihlala ndineengxowa kunye nezangqa phantsi kwamehlo am ngaphandle kwemveliso kunye nonyango olwenzelwe ukunyanga lo mmandla. Le mveliso ihambisa.
I-Cream yamehlo engapheliyoAveeno Walmart.com$ 18.77 THENGA NGOKU
I-Aveeno Cream Eye engapheliyo
Ukuba unengxaki yesikhumba esixakekileyo okanye esidlamkileyo phantsi kwamehlo, sukujonga ngaphaya kokhilimu wamehlo ka-Aveeno, utshilo uGqirha Zeichner. Yayo I-antioxidant- kunye ne-vitamin-rich complex complexate elastin elukhumbeni ukukunceda ukuba wolule kwaye uphinde ubuye umile kwakhona.
Ukujonga kwakhona: Le khrimu yamehlo iyasebenza ekugcineni indawo yamehlo ingekho ngaphandle kokugcoba kwaye ihlala imini yonke. Ndinezincomo ezininzi kwimeko yolusu lwam enemibimbi elinganiselweyo yomfazi oneminyaka engama-65 ubudala. Ndiyabhengeza le nto yokuthambisa.
UkuLungisa ngokuZenzekelayo ukuKhanya kwamehlo Cream eyeyileyoNgeCawa uRiley sephora.com$ 65.00 THENGA NGOKU
NgeCawa uRiley Ngokuzenzekelayo Ukuqaqambisa + Ukujongwa kweCream yamehlo
Bathandwa zii-celebs ezinje ngoDrew Barrymore, le cream cream ebonakalayo ebonakalayo, ikhanyisa izangqa ezimnyama, kwaye ilwa nokukhukhumala ngecaffeine. Ukufakelwa ngamasuntswana abonisa ukukhanya, ivuselela kwangoko amehlo ajongeka ediniwe, lonke elixa ihambisa amanzi kwaye ikhusela ulusu olucekeceke.
Ukujonga kwakhona: Ndifumene isampulu yale cream yamehlo kwaye bendiyithandabuza nyhani. Kodwa le cream yamehlo yandothusa kakhulu. Ndizibonile iziphumo zisebenzisa nje into enye ke kuye kwafuneka ndiyithenge. Ndiyazi ukuba iyabiza kakhulu ikhrim yamehlo kodwa kufuneka ndivume, ukuza kuthi ga ngoku yile kuphela kokundisebenzeleyo. Into eyandothusayo kukuba isuse ngokukhawuleza ukukhukhumala kwam. Kufanelekile yonke ipenny.
wenza njani u-rebel wilson ukunciphisa umzimba
I-Serio yeLiso ye-BioLumin-CDermalogica ulta.com$ 70.00 THENGA NGOKU
I-Dermalogica BioLumin-C yeserum yeliso
Ukuba awuyithandi imvakalelo yekrimu eshinyeneyo, unethamsanqa. IDermalogica ’s I-serum engenaziqholo, isilky iyaziva ilula kulusu Ngelixa uhambisa ukunyuka kokufuma. Ubunzima babo bevithamini C buqulathe nepeptide eyahlukileyo, ke ufumana amandla aphindaphindiweyo okulwa ukuguga.
Ukujonga kwakhona: Ndinesikhumba esibuthathaka esithanda ukuba bomvu kwaye bendingenampendulo kwaphela. Ndinemigca emihle ejikeleze amehlo am kwaye kubonakala ngathi iyazogquma. Iqhubeka kakuhle phantsi komhla wam wokuthambisa. Ngokwenyani kwakungafuneki ukuba ndithambise njengoko ulusu lwam lwalukhangeleka lutsha kwaye lusempilweni.
Umsebenzi weLiso kunyango lwe-AM I-Gel CreamUncedo lokuqala elungec.com$ 36.00 THENGA NGOKU
Uncedo lokuqala Unyango loMsebenzi woLiso oluThathu AM I-Gel Cream
Uninzi lwezithambiso zamehlo zenziwe ukuba zinxitywe ebusuku, kodwa oku i Ifomula yobunzima be-ight yenzelwe ngokukodwa ukusetyenziswa kwemini phantsi kwento yokwenza ukuze ikondle ulusu imini yonke. Isimahla kwizicaphukisi, iqulethe iipeptides kunye nezicatshulwa zezityalo ukunceda ukunciphisa imigca ecikizekileyo kunye ne-hydrate ngokunzulu, ke ulusu lwakho lushiywe lucekeceke.
Ukujonga kwakhona: Emva kokubandezeleka kukoma kakhulu kwindawo yam ephantsi kwamehlo, ndaye ndagqiba kwelokuba ndizame le mveliso kwaye ndonwabile ukuba ndenzile. Bendihlala ndingakwazi ukunxiba iimveliso zokwenza izinto ezinje ngokufihla phantsi kwamehlo am kuba bezizokukheka kwimizuzu embalwa kwaye ziqale ukucima. Ngosuku nje lokusebenzisa le mveliso ndibone ukuphucula kwangoko. Ngumxube ofanelekileyo we-hydration ngaphandle kokuba ube neoyile kakhulu.
I-Vital-E Microbiome yobudala yoKhuselo lweLiso leCreamUPeter Thomas Roth sephora.com$ 55.00 THENGA NGOKU
UPeter Thomas Roth Vital-E Microbiome Age yoKhuselo lweLiso
Le cream yamehlo kaPeter Thomas Roth iqulethe umxube okhethekileyo we-antioxidant , Ukukhutshwa kwengcambu yejinja, kunye ne-hyaluronic acid yokuqaqambisa ulusu, ukukhulisa ukubola, kunye nokukhusela kwiiradicals eziyingozi simahla. Ngaphezu, upakisha caffeine ukunciphisa ukukhukhumala.
Ukujonga kwakhona: Awudingi nto ingako kule mveliso ukwenza umahluko weBIG. Ndayibeka yonke imihla nasebusuku phantsi kwesithambisi sam kwaye ndaqala ukubona iziphumo emva kweveki yokusetyenziswa. Ubumnyama obumnyama phantsi kwamehlo am bukhanyisiwe kwaye imigca yam emihle ayichazwanga.
Ubuso beFutha yamaFuthaKiehl Ukusukela ngo-1851 iqeqswear.com$ 22.00 THENGA NGOKU
Ubuso be-Fuel ye-Fuel Eye De-Puffer
Ifomula engasindi ibonakala ngokucacileyo inciphisa izangqa ezimnyama, imigca emihle, kunye neengxowa phantsi kwamehlo. Inkqubo ye- I-caffeine yongamela imithambo yegazi ukunceda ukususa ulwelo oluninzi kunye nehydrate ngokukhawuleza ukunciphisa ukubonakala kwe ukudumba ngaphantsi kwamehlo , UGqr. Uyilo uyachaza.
Ukujonga kwakhona: Le yimveliso encinci emangalisayo. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, kwaye iyasebenza ngokwenene. Iziphumo zibonakala kwangoko, kwaye yenza amehlo adiniweyo ukuba ahlaziyeke. Kananjalo ayishiyi ifilimu eyomileyo njengezinye zeegel zokuphakamisa kwangoko. Ubungakanani obuncinci bukhulu bokuhamba.
Unyango lwe-InterFuse Cream EYEUlusu lubhetele isikhumba.com$ 105.00 THENGA NGOKU
Ulusu olungcono kwi-Interuse ye-Cream EYE
UKUYA 2021 Uthintelo Ibhaso loBuhle ophumeleleyo, le cream yamehlo ifumana isitampu sokwamkelwa nguMelissa Kanchanapoomi Levin, MD, umsunguli we Dermatology iphela kwisiXeko saseNew York. Uthi iqulethe i-peptide ekhethekileyo elinganisa iBotox ngokuphumla kwezihlunu ezingaphezulu. Ii-hydrators ezongezelelweyo, ukukhanyisa ivithamin C, kunye ne-de-puffing caffeine zizinto nje ezongezelelweyo.
Le mveliso ayibonakalisi uphononongo kwi-Intanethi, njengoko ithengiswa kwisiza sophawu okanye kwiofisi yakho yederm, kodwa uGqirha Levin uqinisekisa ukuba yenye yezona zikhetho zidumileyo ekusebenzeni kwakhe.
Eyona ndlela ifanelekileyo yokufaka ukhilimu wamehlo
Ngoku ukuba une-cream esebenzayo yokulwa imibimbi, kuya kufuneka uyisebenzise! Ukungaguquguquki kubalulekile, kwaye indlela oyisebenzisa ngayo ikrimu yakho inokwenza umahluko kwindlela esebenza ngayo:
Yenza uvavanyo lwepatch: Uya kumangaliswa ukuba abantu bakutyeshela kangaphi ukufunda uluhlu lwezithako ngenxa yokuba bebambekile kwimveliso yemveliso, utshilo uGqirha Rao. Ngaphambi kokusebenzisa nayiphi na imveliso entsha, uyivavanye kwinxalenye encinci yolusu lwakho ukuqinisekisa ukuba ayibangeli mpendulo.
Ixabiso elilinganiswe ngepea kufuneka lanele kuwo omabini amehlo.
Sebenzisa iringi yakho okanye umnwe wepinki ukufaka cream yakho yamehlo ukuqinisekisa ukuba usebenzisa uxinzelelo lokukhanya.
Musa ukurhuqa okanye utsale ulusu, oluqhubela phambili ukukhuthaza imibimbi. Sebenzisa indawo eshukumayo endaweni yayo.
Qiniseka ukuba usebenzisa ikrimu yakho yamehlo kwindawo engaphantsi kwamehlo, iinkophe, kunye nekona engaphandle yamehlo akho, apho imibimbi ihlala iqala khona. Kuphephe ukudibana ngqo namehlo akho.
ungasebenzisa ioyile yekhokhonathi njenge-lube
qhubeka ubona i-666
indlela yokuhlisa umkhuhlane
11 11 inani leengelosi
apple cider iviniga kunye nokwehla kobunzima
Kutheni le nto umbungu wam unuka ngathi ngumntwana